Dhalinyaro Badankoodu Qarda Jeexay Qalinkii:W/Q: Rashiid Sulub Caalin |
Dhalinyaro Badankoodu Qarda Jeexay Qalinkii:W/Q: Rashiid Sulub Caalin
Maqaalkii hore ee soo baxay axaddii dhowayd Ciwaankiisuna ahaa‘Wadaadadeena Laba Dhacaya Iyo Ummaddeena Harraadka Weyn U Qabta Barashada Diinta Islaamka’, waxay iswaydiin ka timid waddaadada laba dhacaya maxay ujeedadeedu tahay, haddaynu is idhaahdo macnee wixii laba dhacaya haddii aanan khaldanayn waxa weeyi ‘waa shay ama shaqsi si toosan u socda oo aan leexleexasho lahayn kuna degdegaya meel uu higsanayo oo hawlihiisa dardar joogto ah galinaya’, waxa kale oo aynu ku soo qaadanay waxa lagu sheego khilaafka wadaadada dhexdooda, anigu waxaan aaminsanahay marka ay laba kooxood isa soo hor fadhiistaan ee mid walba macneeyo sida uu u aaminsan yahay iyo sida uu wax u qabanayo ee laysku af garan waayo doodaasi, ciddii doontaaba ha dhex-dhexaadisee ayaa khilaaf lagu
tilmaami karaa. Sidaa awgeed Rashiid ahaan waxaan kalmadaas ku badalayaa ‘kala tagsanaan’. Inkasta oo aynu qirayno in nimanka wadaadadu ay kaalin weyn oo mug leh ka qaateen horumarka aynu ku talaabsanay waddan ahaan iyo bulsho ahaanba. Waxaana ka mid ah ka qeyb-qaadashadoodii dhinaca Waxbarashada, colaadaha sokeeye oo ay bakhtiiyaan una gurmadaan, wacyigalin aan kala go’ lahayn iyo hagrasho la’aan samafalka ah haddii ay timaaddo arrin aan looga maarmayn. Kala tagsanaantaasna waxaan Ilaahay ka baryeynaa inuu quluubteena isku soo jeediyo.
Haddaan u soo noqono qormadan maanta, dhalinyarada qarda jeexday marka aan leeyahay bi-saraaxa marka looga hadlayo waxaan odhan karaa, hantida uu waddanku leeyahay iyo khayraadkiisa waxa ugu horreeya inay dhalinyaradu xooggooda iyo maskaxdooda gashadaan waddankooda. Waliba marka laga bilaabo da’da 25-ka jirka, oo la odhan karo waxay ku beegan tahay wakhtiga ay tacliinta guud ahaan dhamaystaan dhalinyaradu, halkaasna aad garan karto in 40 sannadood oo dambe lagu xisaabtamayo muruqoodda, xooggooda, Maskaxdooda, Aqoontooda iyo Kartidooda inay waddanka galiyaan, maadaama ay yihiin hantida ugu qaalisan ee waddankani leeyahay. Iyadoo haddii lagu dhufto xisaab calaqan oo qoto dheer tirada guud ee dadweynaha ee markaa joogta iyo inta hawlgab noqonaysa iyo inta xanuuno ku dhici karaan ee aan huri karayn maskaxdooda iyo xooggooda iyo kuwa naafada ah ee kasoo bixi kara bulshada iyo kuwa jeelasha gali kara ama dambiyo ku dhici kara, waxa kaaga soo baxaya celceliska xisaab mala’awaal ah oo muraayad u noqon karta bulshada inta laga dhex heli karo ee laga faa’iidaysan karo xooggooda iyo maskaxdooda 40-ka sanno ee soo socda. Sidoo kale waxa hanti kale ah oo lagu xisaabtamayaa wax-soo-saarka guud iyo khayraadka ku dihin waddanka. ku xisaabtankaas iyo qorshayntaas oo kale ee mustaqbalka fog iyo ka dhowba waxa ku jaan-gooya kagana tusaale qaata waddamada hore u maray xagga koboca dhaqaalahooda iyo daryeelka dadweynaha oo ay hoos imanayaan adeegyada aas-aasiga ah iyo shaqo abuurka. Sidoo kale haddii ay dad kale u baahdaan oo wax-soo- saarka looga faa’iidaysto waxay siyaasaddooda ku fadhiisiyaan dadka waddankooda soo galaya diintooda, dhaqankooda, aqoontooda iyo xaaladda waddamada ay ka imanayaan.
Inkasta oo aanan ahayn dhaqaale-yahan oo aanan cilmiga dhaqaalaha baran, ayaa haddana waxaan ka faa’iidaysanayaa waayo-aragnimadayda 30-ka sanno ah ee aan kusoo dhex jiray bangiyadda gudaha iyo debaddaba, taasoo i siisay inaan ka hadlo kana soo wareego meeshaas dheer. Waxaana la yidhi ‘shimbir waliba dhawaaqeeda ayey ciddaa’ sidaa daraadeed su’aasha aan u ham iyo dig leeyahay waxa weeyi, dhalinyaradeena ka bilaabmata ilaa 25 jir marka la eego wakhtiga aynu ku jirno ma laga heli karaa dhalinyaro u hura waddankooda xooggii, maskaxdii, wadajirkii, isku-duubnaantii, xirfad-yaqaan, haysashadii diintooda iyo dhaqankooda iyo jacaylka waddankooda, qabyaalad la’aant, is-qadirinta iyo is qiimaynta bulshada iyo samirka, ma yihiin dhalinayarada joogtaa qaar u huri kara arrimahan aynu soo sheegnay waddankooda? Inagoo imika aan ka hadlayn shaqsiyaad faro-ku-tiris ah oo aad u dedaalay waxna is baray, meherad fiicanna maskaxdeedii la yimid si fiicanna u shaqaysanaya, marka la eego dhalinyarada badankooda jawaabta su’aashaas aynu is waydiinay waxay aniga ila tahay ‘maya’. waxaanan u daliishan karayaa sababo badan, qarnigii ugu dambeeyey arrinteenu waxay ahayd ‘qalad-qalad ku sax’, waxaanan arrintan aad ugaga hadlay maqaal hore oo aan qoray oo aan u bixiyey ‘xal-ma-raadiyayaashii fulayda ahaa ee fidnoobay’ waxaanad ka daalacan kartaa www.fatxisulub.blog.com. Anigoon ceebayn iyo dhaleecayn midna ugala eedin. Tusaale yar haddaan soo qaato aabbayaasheen iyo awowyadeen waxay aaminsanayeen inay ka yimaaddeen dhoobo, quutal-daruurigoodana ay kala soo baxayaan dhoobo, marka dambana ay dhoobo ku noqonayaan. Waxaanay ku kalsoonaayeen maskaxdooda iyo xooggooda.
Waxaana beddelay oo ka dhabqiyey dadweynihii halgankii nolosha ee ay ku jireen niman ganacsato ah oo la rooraya Bariis, Baasto iyo wax lagu soo yab-yabay meel kale. Waxaana qaaciido jirta ah, marka aad quutal-daruurigaaga la soo bixi waydo, inaad cuni doonto qof kale quutaldaruurigiisa. isla markaana aad qaadanayso dhaqankiisa iyo fikirkiisa. Halkaasna waxay dadweynihii kaga soo bara-kaceen miyigii iyo beerahoodii waxaanay dhexda kagasoo dheceen nolol bilaa qorshe ah, maadaama aan magaalooyinka loo sii qorshayn sidii ay dadkaasi u wajahi lahaayeen nolosha aas-aasiga ah. Iyadoo aanay madaxdii markaa joogtay waxba sii oddorosin waxna aanay ka qaban, kuwii ka dambeeyeyna ay raaceen raadkii madaxdii hore. Waxaana barbar socday hadimooyin ay ka mid yihiin dantii guud oo daaqadda laga tuuray iyo daba ka walwal qof walba isagu isku koobay wixii uu gacanta ku hayey iyo bahal lagu magacaabo qaad oo aan anigu u bixiyey ‘ragganimo siibe’.
Arrimahaas hadimooyinka ah ee aan kor kusoo sheegayna waxaa ka dhashay baqdin, werwer iyo shaki laysku daba wareegaysanayo oo dadkii isku gedaamay oo uu qofkii is odhanayo ‘ waxbaad waayi, ee qoyskaaguun ku dedaal iyo wax xun baa kugu dhici ama waddankaagu waa waddan dadkiisu xun yihiin. waxaana loo baahan yahay in la daweeyo maskaxaha xaaladaas ku sugan.
Waxaan dhalinyarada xusuusin lahaa, inaanan is lahayn dhalinyarada niyad-jabi, laakiin waa siday u muuqato wakhti xaadirkan. Waxaana aynu u baahanahay inay dhalinyaradu beddelaan sida ay u hamiyayaan oo ay diirradda saaraan hagaajinta nafahooda, waddankooda, wax-soo-saarkooda iyo tubta fiican. Maahmaahina waxay tidhaahdaa ‘its never too late’ macnaheeduna yahay ‘marwalba waxbaad qabsan kartaa’. Siday reer Berbera odhan jireenna waxay ahayd ‘habeen kaama tagin.
Dhinaca kale, waxaan halkan ka tacsiyadaynayaa waalidiintii ubadkoodu ku halligmeen baddaha ay u sii marayeen waddamada galbeedka ee tahriibta lagu galo. Waxaana markasta dhacda oo la yaab leh dhalinyaro waalidkood wax haystaan oo haddana is biimaynaya. Haddaan tusaale u soo qaato dhibaatada taagan, waxaanu jaar nahay nin dameer-wale ah oo dhalay 10 carruur ah, dabadeed waxa ka tahriibay inan ka mid ah carruurtiisa, markii ay la soo hadleen kuwa ku shaqaysta tahriibintu ee ay yidhaahdeen lacag soo dir, ninkii waxa istaagay wadnaha.! Sidoo kale dhibaatooyinka taagan ee dhinaca dhalinyarta waxa ka mid ah, inay daawadaan filimadda af-Soomaaliga lagu turjumay ama kuwa kaleba, dabadeedna waxay dhaqanka iyo ficilkaba ka qaataan kuwa wax metelaya, oo ay noloshooda ku fadhiisiyaan kuwa filimada metelaa sida ay u dhaqmaan. Taasina waxay sheegaysaa inaanu ubadkeenu gacanteena ku jirin. Waxaanad dhaqanadaas ka arkaysaa, innamadii oo aan feedhanayn timihii ama surwaal lugo dhuuban misigta ka xidhaya iyo hablo suniyaha xiiraya oo qalin sunne marinaya. Sidaa awgeed waxa habboon inay dhalinyaradu raacaan kuwa Ilaahay diintiisa u ammaanay ee khayrka u deg-degi jiray. Waxaan ku soo gunaanadayaa tusaalayntayda sheeko ku saabsan wiil waalidkii ka caasi garoobay, waxay ahayd hooyo dhashay hal wiil oo kaliya, wiilkaasina wuxuu caasi gareeyey hooyadii. Markii hooyadii ay ku tidhi ‘sowniga hooyo kusoo koriyey ee kula soo dhibtooday maxaad ii caasiyeysaa? Wuxuu ugu jawaabay ‘adigaa iska raaxaysanayey habeenkaan uurka galay’. Allow sahal.
Waxaan kusoo gabagabaynayaa sidii caadada ii ahayd gabayaagii weynaa Alla ha u naxariistee Timacadde siduu sheegay ee uu yidhi ‘nin walowba wixii kula gudboon hoos u dhugo., taasoo ah masrixiyad mala’awaal ah.